ရုံးအဆောကျအဦးထဲဝငျတဲ့အခါ အရငျလိုလကျဗှနှေိပျရုံနဲ့မပွီးတော့ပါဘူး။ ကိုယျ့ရဲ့ ကိုယျအပူခြိနျကို တိုငျးတာဖို့ လိုအပျလာပါပွီ။ ဒါကွောငျ့အပူခြိနျတိုငျးတာဖို့တနျးစီစောငျ့ဆိုငျးရတာတှဖွေဈလာနိုငျပါတယျ။ ဒါကဒုတိယအကွိမျပွနျတငျးကပျြလာတဲ့ ကနျြးမာရေးစောငျ့ရှောကျမှုပုံစံပဲဖွဈပါတယျ။
နမေကောငျးတဲ့သူ ရုံးလာရငျ ဝဖေနျမှုတှမြေားလာတာ
ဥပမာခြောငျးဆိုးနတေဲ့လူရုံးလာရငျ ဟာ . .. ခြောငျးဆိုးနတေယျနျော ဘယျလိုဖွဈတာလဲ... ဆိုတာမြိုး၊ ဒါမှမဟုတျ ဖြားနတောလား ဒါဆိုရုံးမလာနဲ့လဆေိုပွီး ရှောငျဖယျရှောငျဖယျလုပျတာမြိုးတှေ၊ ဝဖေနျတာမြိုးတှပေိုလုပျလာကွပါတယျ။ အရငျကတော့ ဘယျသူဖြားဖြား ဂရုမစိုကျပမေဲ့ အခုအခြိနျမှာတော့ သူဌေးကအစ ဖြားနတောလား ဒါဆိုနားလိုကျလဆေိုတာမြိုးတှေ လူတဈယောကျရဲ့ဖြားနာမှုတှေ၊ မကနျြး မာမှုတှကေို သတိနဲ့စောငျ့ကွညျ့နကွေတာပါ။ ဖြားတယျဆိုတာ ရိုးရိုးတုပျကှေးလညျးဖွဈခငျြဖွဈနိုငျပမေဲ့ အခုအခြိနျမှာကတော့ ကိုဗဈကွောငျ့အရာရာက သံသယစိတျလှနျကဲနကွေပါတယျ။ ဒါကဘယျသူ့ကိုမှ အပွဈတငျလို့မရပါဘူး။
သတျမှတျဧရိယာအကှာအဝေးအတှကျ ကိုယျ့ရဲ့ကိုယျပိုငျစားပှဲနရောတှေ အရငျလိုမဟုတျတော့တာမြိုး လညျးဖွဈနိုငျပါတယျ။ ကိုယျ့နရောရယျသီးသနျ့မဟုတျတော့ဘဲ အဆငျမပွသေလိုထိုငျရတာမြိုးတှဖွေဈနိုငျပါ တယျ။ ရုံးတကျစရာမလိုတော့တာ၊ အိမျကနပေဲအလုပျလုပျရတာမြိုးတှဖွေဈလာနိုငျပါတယျ။ ဒါကသငျလုံးဝ မတှေးဖူးတဲ့လုပျငနျးခှငျပုံစံတှပေဲဖွဈပါတယျ။
အရငျကတော့ အလုပျကိစ်စနဲ့ခရီးခဏခဏထှကျရပမေဲ့ အခုအခါမှာတော့ အလုပျကိစ်စနဲ့ ခရီးသှားဖို့မရှိ သလောကျပါပဲ။ ကပျရောဂါဖွဈနတေဲ့ကာလအတှငျးမှာ ခရီးသှားလာမှုတှကေိုလညျး ရပျတနျ့ထားတာပါ။ အနာဂတျအလုပျအကိုငျကြှမျးကငျြသူတဈဦးဖွဈတဲ့ သှနျဆငျကတော့ အခြိနျတှေ၊ ပိုကျဆံတှဖွေုနျးပွီး အလုပျ ခရီးတှမေသှားပမေဲ့လညျး အလုပျတှပွေီးနိုငျပွီး ဆကျဆံရေးတှေ တညျဆောကျနိုငျဆဲပဲဆိုတာကို ကိုဗဈက သကျသပွေခဲ့တယျလို့ဆိုထားပါတယျ။
ကပျရောဂါဖွဈနခြေိနျအတှငျးမှာ ရုံးတှငျးလုပျထုံးလုပျနညျးတှေ၊ ကငျြ့ဝတျတှကေတော့ အမြားကွီး ပွောငျးလဲသှားပါတယျ။ ဥပမာအနနေဲ့ လကျဆှဲနှုတျဆကျတာ၊ ပှဖေ့ကျတာစတဲ့ လုပျထုံးလုပျနညျးပုံစံတှေ ပွောငျးလဲသှားတာပါပဲ။ လူတှကေ ခွောကျပအေကှာကနေ စကားပွောတာမြိုး၊ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာထိတှမှေု့ နညျးသထကျနညျးအောငျ လုပျဆောငျလာကွတာပါ။
Personal Space ကိုပိုပွီး အလေးထားလာတာ
အရငျကဆိုရငျ လူဆယျယောကျအထကျ အစညျးအဝေးတှေ၊ ဒီထကျပိုမြားတာတှနေဲ့ မကွာခဏအ စညျးအဝေးလုပျရပါတယျ။ ဒါပမေဲ့အခုတော့ ပွောငျးလဲသှားပါပွီ။ မကျြနှာခငျြးဆိုငျအစညျးအဝေးထကျ ဗီဒီယိုကှနျဖရနျ့တှကေို ပိုလုပျလာကွပါတယျ။ နောကျပွီး အရငျလို ထမငျးအတူစားလို့မရတော့တာ၊ ကျော ဖီအတူသောကျလို့မရတော့တာတှပေါပွောငျးလဲလာပါတယျ။
အလုပျမှာ အခမဲ့ကြှေးတဲ့ကျောဖီ၊ မုနျ့တှရေနိုငျတဲ့ နရေ့ကျတှကေ ကုနျဆုံးသှားပါပွီ။ သရစော အမွောကျ အမွားနဲ့ ဘူဖေးပုံစံစားနိုငျတဲ့ အစားအစာတှကေ အရငျက အတိတျဖွဈရပျတဈခုအဖွဈသာရှိနိုငျတော့ပါ တယျ။ အခုအခြိနျမှာ အစားအသောကျကိုစုပေါငျးစားသောကျတာမြိုးတှကေို တငျးကပျြထားသငျ့ပါတယျ။
ကိုဗဈကာလမှာ ကမ်ဘာ့ခေါငျးဆောငျအမြိုးသမီးတှေ၊ လုပျငနျးခှငျကခေါငျးဆောငျအမြိုးသမီးတှရေဲ့ အခနျးကဏ်ဍတှကေို ပိုမိုအသိအမှတျပွုလာတာတှရေ့ပါတယျ။ ကိုဗဈကာလမှာ အမြိုးသမီးတှရေဲ့ စီမံခနျ့ခှဲ မှုတှေ၊ ဦးဆောငျမှုတှကေို သူတို့ရဲ့လုပျဖျောကိုငျဖကျတှထေကျသာလှနျတာကိုမွငျတှခှေ့ငျ့ရခဲ့တာက အမွတျ တဈခုပါပဲ။
ရုံးအတှငျးမှာ နှာခေါငျးစညျးကို မဖွဈမနတေပျထားရတာကလညျး ဒီကာလမှာ လုပျသငျ့ပါတယျ။ ဘယျလောကျပဲ ခွောကျပအေကှာနဦေးတော့ တဈခါတလမှော အနီးကပျသှားလာလှုပျရှားနတောမြိုး လုပျမိ နိုငျပါတယျ။
ကနျြးမာရေးအတှကျခှငျ့ပေးရတာကို အခုအခြိနျမှာ ပွောငျးလှယျပွငျလှယျဖွဈဖို့အရေးကွီးပါတယျ။ ဥပဒအေတိုငျးသှားတာမြိုးထကျ နာမကနျြးဖွဈရငျ အိမျမှာပဲနဖေို့၊ ဘယျလောကျအထိအနားယူဖို့ပွောရမှာပါ။ နောကျပွီး ရုပျပိုငျးဆိုငျရာကနျြးမာရေးအတှကျတငျခှငျ့ပေးတာမဟုတျဘဲ စိတျပိုငျးဆိုငျရာအရလညျး ခှငျ့ပေး သငျ့ပါတယျ။
Photos & source -rd.com
Lockdown အပြီးမှာတွေ့ရမယ့် လုပ်ငန်းခွင်ပုံစံ (၁၀)မျိုး
အရင်က သင်သိခဲ့တဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ယဉ်ကျေးမှုကတော့ အခုအချိန်မှာ ပြောင်းလဲခဲ့ပါပြီ။ လူတွေက ဒုတိယအကြိမ်ကိုဗစ်ကို ပြန်ကြောက်လာရပြန်ပါပြီ။ ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းက အရှိန်ကောင်းလာချိန်မှာ လုပ်ငန်း ခွင်ပုံစံကလည်း ပြန်လည်တင်းကျပ်ပြီး ပြန်လည်ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါပြီ။ အဲဒီပြောင်းလဲလာတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ပုံစံတွေကဘာတွေများဖြစ် မလဲ။ ကြည့်ကြရအောင်ပါ။
ရုံးအဆောက်အဦးထဲဝင်တဲ့အခါ အရင်လိုလက်ဗွေနှိပ်ရုံနဲ့မပြီးတော့ပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်အပူချိန်ကို တိုင်းတာဖို့ လိုအပ်လာပါပြီ။ ဒါကြောင့်အပူချိန်တိုင်းတာဖို့တန်းစီစောင့်ဆိုင်းရတာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကဒုတိယအကြိမ်ပြန်တင်းကျပ်လာတဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်။
နေမကောင်းတဲ့သူ ရုံးလာရင် ဝေဖန်မှုတွေများလာတာ
ဥပမာချောင်းဆိုးနေတဲ့လူရုံးလာရင် ဟာ . .. ချောင်းဆိုးနေတယ်နော် ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ... ဆိုတာမျိုး၊ ဒါမှမဟုတ် ဖျားနေတာလား ဒါဆိုရုံးမလာနဲ့လေဆိုပြီး ရှောင်ဖယ်ရှောင်ဖယ်လုပ်တာမျိုးတွေ၊ ဝေဖန်တာမျိုးတွေပိုလုပ်လာကြပါတယ်။ အရင်ကတော့ ဘယ်သူဖျားဖျား ဂရုမစိုက်ပေမဲ့ အခုအချိန်မှာတော့ သူဌေးကအစ ဖျားနေတာလား ဒါဆိုနားလိုက်လေဆိုတာမျိုးတွေ လူတစ်ယောက်ရဲ့ဖျားနာမှုတွေ၊ မကျန်း မာမှုတွေကို သတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြတာပါ။ ဖျားတယ်ဆိုတာ ရိုးရိုးတုပ်ကွေးလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ အခုအချိန်မှာကတော့ ကိုဗစ်ကြောင့်အရာရာက သံသယစိတ်လွန်ကဲနေကြပါတယ်။ ဒါကဘယ်သူ့ကိုမှ အပြစ်တင်လို့မရပါဘူး။
သတ်မှတ်ဧရိယာအကွာအဝေးအတွက် ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စားပွဲနေရာတွေ အရင်လိုမဟုတ်တော့တာမျိုး လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်နေရာရယ်သီးသန့်မဟုတ်တော့ဘဲ အဆင်မပြေသလိုထိုင်ရတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါ တယ်။ ရုံးတက်စရာမလိုတော့တာ၊ အိမ်ကနေပဲအလုပ်လုပ်ရတာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကသင်လုံးဝ မတွေးဖူးတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ပုံစံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
အရင်ကတော့ အလုပ်ကိစ္စနဲ့ခရီးခဏခဏထွက်ရပေမဲ့ အခုအခါမှာတော့ အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ခရီးသွားဖို့မရှိ သလောက်ပါပဲ။ ကပ်ရောဂါဖြစ်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာ ခရီးသွားလာမှုတွေကိုလည်း ရပ်တန့်ထားတာပါ။ အနာဂတ်အလုပ်အကိုင်ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ သွန်ဆင်ကတော့ အချိန်တွေ၊ ပိုက်ဆံတွေဖြုန်းပြီး အလုပ် ခရီးတွေမသွားပေမဲ့လည်း အလုပ်တွေပြီးနိုင်ပြီး ဆက်ဆံရေးတွေ တည်ဆောက်နိုင်ဆဲပဲဆိုတာကို ကိုဗစ်က သက်သေပြခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။
ကပ်ရောဂါဖြစ်နေချိန်အတွင်းမှာ ရုံးတွင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ၊ ကျင့်ဝတ်တွေကတော့ အများကြီး ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တာ၊ ပွေ့ဖက်တာစတဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပုံစံတွေ ပြောင်းလဲသွားတာပါပဲ။ လူတွေက ခြောက်ပေအကွာကနေ စကားပြောတာမျိုး၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့မှု နည်းသထက်နည်းအောင် လုပ်ဆောင်လာကြတာပါ။
Personal Space ကိုပိုပြီး အလေးထားလာတာ
အရင်ကဆိုရင် လူဆယ်ယောက်အထက် အစည်းအဝေးတွေ၊ ဒီထက်ပိုများတာတွေနဲ့ မကြာခဏအ စည်းအဝေးလုပ်ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့အခုတော့ ပြောင်းလဲသွားပါပြီ။ မျက်နှာချင်းဆိုင်အစည်းအဝေးထက် ဗီဒီယိုကွန်ဖရန့်တွေကို ပိုလုပ်လာကြပါတယ်။ နောက်ပြီး အရင်လို ထမင်းအတူစားလို့မရတော့တာ၊ ကော် ဖီအတူသောက်လို့မရတော့တာတွေပါပြောင်းလဲလာပါတယ်။
အလုပ်မှာ အခမဲ့ကျွေးတဲ့ကော်ဖီ၊ မုန့်တွေရနိုင်တဲ့ နေ့ရက်တွေက ကုန်ဆုံးသွားပါပြီ။ သရေစာ အမြောက် အမြားနဲ့ ဘူဖေးပုံစံစားနိုင်တဲ့ အစားအစာတွေက အရင်က အတိတ်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုအဖြစ်သာရှိနိုင်တော့ပါ တယ်။ အခုအချိန်မှာ အစားအသောက်ကိုစုပေါင်းစားသောက်တာမျိုးတွေကို တင်းကျပ်ထားသင့်ပါတယ်။
ကိုဗစ်ကာလမှာ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်အမျိုးသမီးတွေ၊ လုပ်ငန်းခွင်ကခေါင်းဆောင်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍတွေကို ပိုမိုအသိအမှတ်ပြုလာတာတွေ့ရပါတယ်။ ကိုဗစ်ကာလမှာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ စီမံခန့်ခွဲ မှုတွေ၊ ဦးဆောင်မှုတွေကို သူတို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေထက်သာလွန်တာကိုမြင်တွေ့ခွင့်ရခဲ့တာက အမြတ် တစ်ခုပါပဲ။
ရုံးအတွင်းမှာ နှာခေါင်းစည်းကို မဖြစ်မနေတပ်ထားရတာကလည်း ဒီကာလမှာ လုပ်သင့်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်ပဲ ခြောက်ပေအကွာနေဦးတော့ တစ်ခါတလေမှာ အနီးကပ်သွားလာလှုပ်ရှားနေတာမျိုး လုပ်မိ နိုင်ပါတယ်။
ကျန်းမာရေးအတွက်ခွင့်ပေးရတာကို အခုအချိန်မှာ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဥပဒေအတိုင်းသွားတာမျိုးထက် နာမကျန်းဖြစ်ရင် အိမ်မှာပဲနေဖို့၊ ဘယ်လောက်အထိအနားယူဖို့ပြောရမှာပါ။ နောက်ပြီး ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအတွက်တင်ခွင့်ပေးတာမဟုတ်ဘဲ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရလည်း ခွင့်ပေး သင့်ပါတယ်။